Mootota Itiyoophiyaa Mootoota shiraa fi Soba Malee Hin Jiraanne! -
Mootota Itiyoophiyaa Mootoota shiraa fi Soba Malee Hin Jiraanne!
Baarentuu Gadaa Irraa
Uummattoonni har’a impaayeera itiyoophiyaa keessa jiran guyyaa gabroonfattoota Habashaa qawwee warra lixaarraa argatanii itti dulan harkatti kufanii kaasee guyyaa tokkofillee dhugaa, walqixxummaa fi mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu argatanii hin beekan. Minilkirraa kaasee amma wayyaanee har’aatti dhugaan biyya san keessa hin jiru, walqixxummaan, mirgi uummaaa fi dimookiraasii dhagahamees, hojiirra oolees hin beeku. Uummanni akka gabraatti weeratoonni qawwee harka isaanii seeneen itti duulan ammo akka mootii mootootaatti waan fedhanii fi beekan hunda irratti dalagaa as gahan.
Saboonni har’a impaayeerittii keessatti manakaraaraa jiran kun addatti Oromoo fi saboonni kibbaa guyyaa kololnii habshaa jalatti kufanii kaasee amma Wayyaanee har’aatti guyyaa tokkoofillee akka saba biyya ofii irra jiraatutti jiraatanii hin beekani. Hidhaa fi ajjeechaan kan irratti raawwatu caalaa qabeenyuma isaaniitti fayyadamaniilleen akka hiyyummaa keessaa hin bane saamamamnii hiyyoomaa, beelaa fi gadadoof saaxilamaa turan, hara’allee impaayeera sana keessatti kan beeklaan waadaamaaa jiru nama mil. 10 oli.
Mootoonni dhufaa darbaan impaayeera tana bulchaa turanii fi jiran kun dhugaan mala akka ta’e hin beekan, ykn dhugaa dhagahuufis, dubbachuufis fedhii hin qabani. Dhugaan isaaniif du’a. ni kijibu, ni haalu, sobanii sobsiisuun amala isanaiti. Akka uummattoonni kolonii isaanii jala jiru nageenya, misoomaa fi guddina argatu hin barbaadan, ofii saamanii duroomnaan, nyaatanii quufanii bullaan isaaniif saboonni biyyattii dhumanis jiraatanis homaayyuu miti. Kanneen darbanis ta’e kanneen har’a jiranis kanuma hojiirra oolchaa jiran. Keessumaa wayyaaneen har’a maqaa sabootaatiin kakkachaa jirtu yakka ishiin saboota biyayttii irratti addatti ammo uummata Oromoorartti raawwattu qabxiilee kaafne maraafuu ragaa guddaadha.
Wayyaaneen waggoota 26n daraban uummattoota impaayeerittii warra kolonii ishii jala jiran sobaa, hidhaa, ajjeesaa fi saamaa turteetti, ammalleen kanuma itti fufsiisuuf carraaqaa jirti. Akkuma hunduu quba qabu barri wayyaanee bara hidhaa fi ajjeechaa bara beelaa fi gadadoo ti. Bara wayyaanee waggoota 26n darban keessa wanti hin sobamanii fi hin hololmin hin jiru, dimookiraasii jedhame, hin taane, mirga isaa gaafachuu isaatiin kan hidhame, ajjeefamee fi biyyaa godaansifame darbees eessa buuteen isaa dhabame amma hin qabu.Guddina, misooma, guyyaatti 3 nyaattu jedhamees ture. Kunnis kunoo habjuu ta’ee hafe. Waggaa waggaa namni mili.15 ol biyyattii keessatti qamadii gargaarsaa eeggata.
Wayyaaneen mootoota abbaa irree ishiin dura turanii fi impaayeera san bulchaa turan hundarraawuu murna dabduu, shiraa fi sobaan beekamtuudha. Murna boru hin beeknesi. Warri ishiin bixxiltee saboota biyayttiitti bobbaafte kanneen akka OPDO, DHDN fi bi’aadn jedhamanis akkasuma sobdoota, hattootaa fi gara jabaoota dhiiga sabootaatiin daladalaniidha. Wayyaanee fi ergamtoonni maqaqa sabootaatiin daldalan kun yakkoonni waggoota 26 darbaniif raawwaachaa turan lakkaawwamee hin dhumu.
Hidhaa fi ajjeechaan alatti saboonni biyyattii addatti Oromoon waggoota 26n darbaniif qabeenya isaa garmalee saamameera, qayee fi qabeenyarraa buqqaafameera. Naannwa shaggara dabalatee gutummaa Oromiyaa keessatti maqaa invastimantiitiin lafti Oromoo saamameera. Kan kana morme kuun ajjeefamee kuun mana hidhaa jira kuunis bayyaa godaansifameera. Addatti ammo yakki waggoota 3n darbanii asi wayyaaneedhaan Oromoo irratti raawachaa jiru akkaan sukanneessaa fi yakka duguuggii sanyiiti.
Waggaa 3n darban erga uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaa nagahe jedhee bilsummaa isaa dhungoofachuuf gamtaan ka’ee asii wayyaaneen dhiphuu keessa seenuun yakka danuu dalagaa jirti. Yakka Oromoorartti raawwachaa turtee fi jirtu kun ammo hagama akka sukanneessaa ta’e Oromoo qofa osoo hin ta’in sabboonni biyyattii hundi kn quba qabaniidha.Yakki lafa kanarra jira jedham hundi saba Oromorratti wayyaanee fi ergamtoota ishii miseensoota OPDOtin raawwateera.
Dura deemsa OPDOtiin ilmana Oromoo sabboonnonni saba isaaniif quuqaman mana, bakka baratanii fi hojjetanii guuramanii murtii malee ajjeefamaniiru, hidhamaniiru, dararamaniiru bakka buteen isaanii dhabamsiifameera. Kan kun isii hin quubsin wayyaaneen saboota olla Oromoo jiranis Oromoorratti hidhachiiftee bobbaasuun kunoo ajjeechaa fi darararaa raawwatu itti fufteetti. Har’a Oromoon kumaa kitilli baha, kibba bahaa fi kibbaan qayee fi qabeenyarraa buqqa’eera.Waraanni sumaalee liyyuu hayil jedhee of yaamuu fi jeneraaloonni wayyaanee wal ta’anii Oromoo haadhaa turan ittis jiru.
Waraanni kun kumootaan ajjeesee, kuma kurnootaan madeessee,kuma dhibbootaan qayee fi qabeenyarraa buqqiseera. Yakki sukanneessaan ammalleen uummata Oromoo naanichaarratti rwwachaa jira. Sirnichi osoo nagaa, guddinaa fi waliin jireenya sabootaa jedhee soboo fi hololuu gama lixa Oromiyaatinis akkasuma hidhattoota Gumzi Oromootti bobbaasuun yakka danuu Oromoorrati raawwachaa turu hundatu quba qaba.
Dhaabni maqaa Oromootin kakatuu jaleen wayyaanee OPDOn waggoota 26n darabniif gorsa wayyaaneerraa argatteen akka waan aantumama uummta Oromoo qabdu odeessaa fi hololaa turteetti. Kessumaa erga qabsoon Oromoo wayyaanee aangorraa darbuun waan hin hafnee fi kan balbala gahee ta’uun mirkanaawaa dhufee asii lubbuu wayyaanee baraaruuf hololli hin gaggeessine hin jiru. Hololii sobaa akka waan aantummaa Oromoo qabduu fi Oromoof qabsaawaa jirtuutti gaggeessitu kunis yeroo ammaa kana heddummaachaa dhufeera.
Eeyyee OPDOn dhaaba Oromoof quuqamaa jirtu of fakkeessitee oduu hedduu facaasaa fi hololaa jirti. Akkuma naanchi nyaachaa boo’a jedhamu san OPDOn Oromoo nyaachaa fi nyaachisaa akka dhaaba Oromoof gaddeeteetti himimmaan sobaa boo’aa jirti. Dhugaan lafarra jiru garuu hin jijjiramne. Oromoon guyyaa wayyaaneen aangoo humnaan qabatteee OPDO Oromoo irratti ijaartee kaaasee biyya isaarartti ajjeefamaa, hidhaamaa fi dararamaa akaksumas saamamaa jira. Beelaa fi gadadoof saaxilamee rakkoo keessatti mankaraaraa jira.
OPDOn kan biraa haa hafuutii ajjeechaa yeroo ammaa kana liyyuu hayilii sumaaleetiin Oromoorratti raawwachaa jiru hin dhaabsifne. Odoodhuma OPDOn sobduu, Oroomoof dhaabbadhe jettuu Oromoon ajjeefamaa jira, qayee fi qabeenyarra buqqifamaa jira, inni buqqifame kunoo kumni dhibba 6 ol amma har’aatti hurufatti kufee gargaarsa lammiitiin nyaatee bulee olaa jira. Qorraa fi aduu keessatti qaqamaa jira. Osoodhuma OPDOn dhaadattuu fi Oromoofan dhaabbadhe jettee hololtuu Waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo sabboonoo mirga lammii isanaiif falaman manneen barnootaa keessatti, bakka hojii fi addabaabayitti ajjeesaa jira. Hidhaa fi dararaa jira. Kanarraa ka’uun kalees bara wayyaanee har’aas wanti abbootiin irree mootonni imaapaayeera san bulchaa turanii fi jiran odeessaniifii dhugaan laffarra jiru gargar ta’uu hubanna. Kan jedhanii kan hojjetan wal argee hin beeku. Kan ta’aa jiru kan biraati kan bulchitootaan hololamu kan biraati.
Eeyyee OPDO/Wayyaaneen sobdoota, yakkamtoota, fakkeessitoota,Oromoo ajjeesaa, hidhaa fi dararaa akkasumas saamaa fakkeessiif yakka Oromoorratti raawwateef gaddi nutty dhagahame jedhanii qoosu. Dhugaan jiru kan muldhisu garuu Kan duuba taa’ee yakkicha hojjete fi hojjechaa jiru wayyaanee fi OPDO hara’a maqaa Oromootiin kakachaa jirtuudha. Uummann Oromoo dhugaa kana waan beekuuf kunoo qabsoo isaa FXG finiinsaa jira. Mirga isaa qabsoo isaan gonfachuuf daandii walakkaa darbeera. Kun eessattuu fi haala kam keessattuu jabaatee itti fufuu qaba. Oromoos ta’e saboonni biyyattii hunduu qabsoo isaanii dhiiga isaanii itti cobsanii asiin gahan jabeessanii itti fufanii sirna gochii fi oduun isaa gargara ta’e kana ofirraa kaasuun bilisa of baasuu qabu. Aantummaan afaanii OPDO dhan hololamaa jiru Oromoo dhumaatii jalaa hin baafne, Kan Oromoo s ta’e saba cunqursaa jala jiru kamuu bilisa isa baasuu fi dhumaatii jalaa isa baasus qabsoo isaa malee falli biraa hin jiru.
Ethiopia restricts internet access amidst new protest.
ኦህዲድ (OPDO) የመጨረሻ ውሳኔ ለማድረግ የምገደድበት ደረጃ ላይ ደርሷል
Afaan Oromoo fi Oromoo afaanii
“Bixilleen Xannee Dhoogguf Malee Quufaaf Hin Geessu”
Biyyi tokko kan walaboomtus ta’ee,sabni tokko kan bilisoomu wacaa fi shaffee guddaan waan lallabaniifii miti!
Fixiinsa Jumlaa (Massacre) Ummata Oromoo Irratti Itti Fufee Gaggeeffamaa Jiru
Oromiyaa Guyyaa Hardhaa – Muddee 13, 2017
Poolisiin Oromiyaa har’a Yaaballotti Hosteelii fi Mana Barusma Sadarkaa lammeessotti nama dhaante aara itti gadi dhiifte nama hedduu miite
Hardha Oromiyaa Keessatti Tan Deemaa jiruu – (Will update you here)
TAN FACAASAN HAAMMACHUUN, SEERA UMAMAATI ! – Kutaa 2ffaa
Haala uummatani Oromoo keessa jiru dhugumatti hubannee jirraa?
Qabsoon Kan Isa Loluu Immoo Kan Isa Ololuu Ti ?
Manni Barnoota Moorota Yuuniversitoota keessatti chufammaa Jira
Guyyaa Har’aa Godina Wallaggaa Magaalaa Mandii Keessatti FXG Qeerroon Gaggeeffamu Itti Fufee Jira.
Gaaffii Siyaasaa Oromoof Wayyu: Walabummaa Oromiyaa
TAN FACAASAN HAAMMACHUUN, SEERA UMAMAATI !
Oromiyaa walaboomtu moo Federeeshinii Dhugaa
Hooggantoota Tiksee Tarsiimoo Qabsoo Kaleessaa Fi Ardhaa Akkamitti Wal Dhuunfachiifna?
ነፃ የኦሮምያ መንግስት ወይም እውነተኛ የክልል ፌዴሬሽን
Labsa EPRDF Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo January 4, 2018